समाचार Archives - Page2of 23 - A complete Nepali news portal based on news & views
छन्दवादी समाज नेपाल, रूपन्देहीले छन्द अभियन्ता, कवि तथा प्राज्ञ डा. देवी नेपालको जन्मदिनमा उहाँकै नवीनतम कृति ‘समुद्रमन्थन’माथि काव्यिक विमर्श गरेको छ । कार्यक्रमकाे उद्घाटन कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि नेपाल प्रज्ञा–प्रतिष्ठानका उपकुलपति डा. जगमान गुरुङले कृतिभित्रको एउटा श्लोक वाचन गरी गर्नुभएको थियो । उक्त कार्यक्रममा डा. गुरुङले परिष्कृत र कलात्मक भाषाशैलीको प्रयोग गरी पुराणकालील बिम्बहरूलाई लाक्षणिक रूपमा […]
काठमाडौँ । दसाैँ साताको घोस्ट राइटिङ् लघुकथा प्रतियोगिता आजदेखि सुरु भएको छ । यो प्रतियोगिता साप्ताहिक रूपमा सञ्चालन हुन्छ । पुनः बढेकाे काेराेना सङ्क्रमण र राेकथामका लागि जारी गरिएकाे निषेधआज्ञालाई ध्यानमा राखेर याे साताकाे लागि लकडाउन र जनजीवनलाई विषय बनाइएको छ । यस चरणमा प्रतियोगी कथाकारहरूले काेराेनाले ल्याएकाे आतङ्क, सरकारले जारी गरेकाे निषेधआज्ञा तथा यसले […]
काठमाडौं । साहित्यकार केदार संकेतद्वारा लिखित संस्मरणमा आधारित उपन्यास अफगानी रणमैदान बजारमा आएको छ । बुधवार राजधानीमा एक समारोहकाबीच उक्त कृतिको विमोचन गरिएको हो । बरिष्ठ साहित्यकार रोचक घिमिरे, समालोचक प्रा.डा. गोविन्दराज भट्टराई, समालोचक प्रा.डा.कुमार कोइराला साहित्यिक समालोचक नेत्र एटम, साहित्यकार पत्रकार तथा पत्रकार श्रीओम श्रेष्ठ रोदन, साहित्यकार इल्या भट्टराई लगायतले उक्त कृतिको सामूहिक रुपमा […]
काठमाडौं । १११औं अन्तर्राष्ट्रिय नारी दिवसको अवसरमा सखी प्रतिष्ठानले “राष्ट्रियता प्रबर्द्धनमा नारी भूमिका” बिषयक विचार गोष्ठी सम्पन्न गरेको छ । सखी प्रतिष्ठानकी अध्यक्ष मन्जिला अनिलको अध्यक्षतामा सम्पन्न सो कार्यक्रमको प्रमुख अतिथि नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानकी प्राज्ञ माया ठकुरी रहनु भएको थियो । कार्यक्रममा राष्ट्रिय सूचना आयोगकी आयुक्त माननीय कमला ओली, मातृभूमिका लागि नेपालीका संयोजक देवप्रकाश त्रिपाठी, […]
काठमाडौं । राजधानीमा सूर्योदय गजल संग्रहको लोकार्पण भएको छ । डी. आर. न्यौपाने ‘सूर्य’ द्वारा लिखित उक्त गजल संग्रह विमोचन समारोहमा साहित्यकार एवं पूर्व उपकुलपति विष्णुविभु घिमिरेले प्रमुख आतिथ्यता गरेका थिए । गजलकार डिल्लीराम न्यौपानेकी प्रतिनिधिका रुपमा छोरी समीक्षा न्यौपानेले उपस्थित अतिथिहरुलाई स्वागत मन्तव्य दिएकी थिइन् । अनेसास नेपाल च्याप्टरको आयोजना एवं पुस्तकका सम्पादक रमेश […]
२९ माघ २०७७, बिहीबार २२:२१ February 11, 2021 Nonstop Khabar
काठमाडौं, २९ माघ । ‘स्मृतिमा प्रेम नारायण प्रेमी’ स्मृतिग्रन्थ –२०७७ पुस्तक बिमोचन भएको छ । आज रिपोर्टस् क्लब नेपालमा पुर्व शिक्षामन्त्री समेत रहेका वरिष्ठ साहित्यकार मोदनाथ प्रश्रितले पुस्तक बिमोचन गरेका हुन् । ६७२ पृष्ठको पुस्तकमा ओखलढुगांका पुराना कम्युनिष्ट नेता प्रेम नारायण पे्रमीका योगदानहरु उल्लेख छन् । उनी पत्रकारीतामा समेत सक्रिय थिए । पुस्तकमा प्रेमीलाई चिन्ने […]
८० वर्षपछि पुनः फाँसीमा झुन्ड्याइए शुक्रराज शास्त्री
१७ माघ २०७७, शनिबार १०:१२ July 17, 2021 Buddha Sharan
काठमाडौँ। आजभन्दा ८० वर्ष अगाडि राणाहरुले आफ्नो विरोध गरेको भन्दै शुक्रराज शास्त्रीलाई टेकुस्थित खरिबोटमा झुन्ड्याएर हत्या गरेका थिए । निरङ्कुश जहानीय राणा शासनको विरोधमा उत्रिएका ती बहादुर योद्धाहरुलाई झुन्ड्याएको त्यो दृष्य ८० वर्ष पछि शुक्रबार दोहरियो। ८० वर्षपछि शुक्रराज शास्त्री फेरि निरंकुश शासकको फाँसीमा बीच सडकमै झुन्डिए । ८० वर्ष अगाडिको त्यो दृष्य शिल्पी […]